Umhla My Pet » 6 Kubalulekile Izinto Amadoda Cinga Malunga Xa Usabelana Ngesondo
Ntoni guys ucinge ngexesha lokwabelana ngesondo? Lo mbuzo mnye ukuba iye yamaxongo endibulala abasetyhini ukusukela ngexesha Adam noEva. Kangangeenkulungwane zidlule, kodwa abafazi bambalwa ngengqiniseko ukuba bayazi kakuhle into iqabane yabo ucinga xa usabelana ngesondo. Le ngxoxo ingezantsi liphonononga iingcinga ukuze ahlale ingqondo yendoda ngexesha lokwabelana ngesondo.
Ithemba andithanga uyayizama kwexesha
ixhala Performance ngexesha ngesondo yinto phantse wonke umntu nazo xa usabelana ngesondo. Kuba inxenye Yinto rhoqo, ngexa abanye nto yenzeka kuphela kwizihlandlo ezinye ezithile ezifana xa usabelana ngesondo emva kwexesha elide, ukufumana ayizukuba neqabane olutsha, etc. nexhala Performance ngakumbi phakathi kwabantu kunye nembali kuchama kwexesha.
Ukuba bayancwina enjengale, okanye zimbi ngokwenene?
Ukuncwina yinxalenye ebalulekileyo nasiphi na isenzo sesondo. Guys alusoloko siqinisekile kakhulu malunga ngendlela bayancwina. Xa usabelana ngesondo, bona badla ukwenza iinzame eziliqela wowufeza, nigcume, yabo. Oku kuba besoyikela ukuba bekhala embi sibuye iqabane zabo. Ngoko ke, ukuba umyeni wakho okanye iqabane ukuncwina ngokwahlukileyo izihlandlo ezahlukeneyo ngexesha lokwabelana ngesondo, ukuze kuba yendalo kwaye kunokuba nesiphumo yemizamo esenza wowufeza encwina bakhe nje.
Ithanda ukuba? Ngoko kutheni na cwaka ukuze?
Oku kwakhona byproduct ngayo ixhala yokusebenza ukuba amadoda kufuneka ngexesha lokwabelana ngesondo. Umbuzo kudla ikukhathaze abantu njengoko abafazi bayathanda ukuba bezithetha ngaphezu kwamadoda xa usabelana ngesondo; nokuba, ngaphandle kusoloko kukho.
Iyinyaniso kukho nabafazi abaninzi baye cwaka ngenxa nje azikuthandi into iqabane yabo akwenzayo. nokuba, ukuba kusoloko asingomzekelo. Ezinye kuzola ngenxa nje bakhetha ukuhlala cwaka.
Ngaba ndifanele ndithethe emdaka?
Amanye amadoda athethe elimdaka, kuba nje luyazizela kubo, xa kukho abanye abantu na ukuba nje ukuba iqabane zabo. nokuba, akukho kudla ukudideka ezingqondweni zabo ngokuphathelele kangakanani iqabane yabo uthanda ukuva amazwi anjalo ngexesha lokwabelana ngesondo; Oku kwenzeka ubukhulu becala xa amadoda abanobudlelwane olutsha.
Oh! Oko kugqibelele
Eli binzana omnye eqhelekileyo amadoda nje ndibone izihlangu ogqibeleleyo amabele okanye yahlaba. Indoda nokuba ucinga njalo xa iqala unandipha intshukumo ezininzi. Ingqondo yomntu unako ukuqala nokuphimisela “oh, Oko kugqibelele” emva ubungqina isenzo sexy kakhulu liqabane lakhe.
Ukucinga nabanye abafazi
abafazi abaninzi baya kufumana kule ezothusayo, kodwa abantu bacinge ngezinye abafazi xa usabelana ngesondo. Oku kudla ngokwenzeka xa ngesondo uba mdla emva kokuhlala kubudlelwane iminyaka. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba iqabane wakho ucinge namanye amabhinqa xa usabelana ngesondo, athathe amanyathelo netyeleba up ulwalamano lwakho.
Ezi nje kwizinto ezimbalwa ukuba umntu ukucinga ngexesha lokwabelana ngesondo. Akuna iingcinga ezinga ngaphezulu ibingezozilumkiso engqondweni yomntu xa usabelana ngesondo ngokuxhomekeke kwimeko nguye.
7 Inyaniso Kwintlekele Malunga Ukuthandana Modern
Top US Cities ukuba lingenakumbi